Sonke sizwile izinkulumo noma ngabe-meteorologists, izinhlelo zokusebenza zeselula ezisitshela isimo sezulu noma ngokumane ngesiko jikelele, ukuthi "ukushisa okunjalo okuzwa ukushisa okunjalo." Lokho ukuzwa okushisayo kungahle noma kungahluke ngokushisa kwangempela esikuso.
Ngabe siyazi ngempela ukuthi yini lo moya opholile futhi kanjani ingabe izazi zezulu ziyakubala?
Ngobusika noma ehlobo asizwa ukushisa noma amakhaza afanayo uma kunomoya, kunomswakama noma lina. Mhlawumbe sisesikhathini sasebusika esinamazinga okushisa ayi-9 kodwa asikho umoya, konke ukuzola futhi libalele futhi akufani nosuku olufanayo olunezinga lokushisa elifanayo kepha lina noma kunomoya wasenyakatho. Yilowo mehluko esiwabiza ngokuthi ukuzwa okushisayo. Ingabe ukubanda noma ukushisa esikubonayo kungakhathalekile ukushisa kwangempela lapho imvelo ikhona.
Lowo mehluko emazingeni okushisa akhona phakathi kokuzwa kwesikhumba, imvelo esizungezile nejubane lomoya yilokho okunquma inani lokushisa esikulahlekelayo emzimbeni wethu futhi yilokho okusenza sizizwe sibanda noma sishisa ngokwengeziwe. Ebusika siyazi ukuthi ukuhlanganiswa kwamakhaza nomoya ezindaweni ezivezwe kakhulu zomzimba wethu yikhona okunquma inani lokushisa esikulahlekelayo. Yingakho kubalulekile ukugqoka izingubo ezifudumele ukunciphisa indawo evezwe kulezi zinguquko ekushiseni nasekulahlekeni kokushisa komzimba. Imvamisa, izingxenye zomzimba ezichayeka kakhulu kulo muzwa oshisayo yizandla, ubuso futhi, ngezinye izikhathi, nezinyawo.
Ebusika umoya nomswakama kuthinta kakhulu isithuthuthu
Lokhu kuzwa okushisayo kuvusa intshisekelo kanye nelukuluku ezakhamuzini, ngoba kwesinye isikhathi nangokuvama okulinganiselwe, sizithola sisezinsukwini zasebusika lapho sibheka khona i-thermometer bese sibona ukushisa okungabandi kakhulu. Kodwa-ke, siyabanda. Lokhu kungenxa yokuthi uma kukhona umswakama ophezulu noma umoya obandayoKumele sizisonge kahle ngoba kuzonikezwa izimo ezifanele ukuze isikhumba sethu silahlekelwe ukushisa komzimba.
Ngakho-ke, njengesifinyezo singachaza ukuzwa okushisayo njenge izinga lokushisa elisuselwa kunkomba yokulahleka kokushisa komzimba okubangelwa ukuhlanganisa izinga lokushisa, umoya kanye nomswakamo omncane.
Siyazi ukuthi umuzwa wokubanda noma ukushisa ungahluka ngokuya ngezimo zezulu zomoya, umswakama, njll. Kepha kubalwa kanjani ukuphola komoya?
Kunamatafula abala umuzwa oshisayo ngokususelwa ku- isivinini somoya nokushisa. Ngokusobala uma sisebenzisa igama elithi ukubanda komoya njengento ethile, la mathebula ngeke asize kakhulu. Okusho ukuthi, umuntu ngamunye unokubona kwakhe nokukhuthazela kwakhe ebusweni bokushisa nokubanda. Kwesinye isikhathi, kunabantu abangaba semikhonweni emifushane ngo-10 ° C kanti abanye badinga indawo yokukhosela ezingeni lokushisa elifanayo. Lokhu akusho ukuthi izinga lokushisa elizungezile lingaba ngu-10 ° C, kepha umuzwa oshisayo, ngenxa yezimo zomoya noma zomswakama, ngu-7 ° C. Lokho wukuthi, yize izinga lokushisa langempela lingu-10 ° C, thina sikubona sengathi kungu-7 ° C.
Isibonelo, ngokusho kwalawa amatafula, ezingeni lokushisa elingu-0 ° C nangomoya ozolile, mhlawumbe ngeke sizizwe sibanda kakhulu uma sisongwe kahle. Kodwa-ke, ngezinga lokushisa elifanayo kepha nangomoya ongaba ngama-40 km / h, umuzwa wokushisa esizokuba nawo uzoba -15 ° C futhi kuzobanda kakhulu. Njengokulangazelela, uma sihlala ku-0 ° C nemimoya engaphezu kwama-65 km / h yokushaya kungasidalela izinkinga zempilo.
Ukubalwa kokuzwa okushisayo akulula, ngoba sibheka amatafula futhi kuphelele lapho, kepha abalwa kanjani la manani? Yebo, ngasekupheleni kweminyaka yama-1930, umhloli wamazwe UPaul Siple usungule indlela yokwenza ifomula yokuqala yezibalo yokubala umuzwa oshisayo njengoba abona ukuthi ezindaweni ezibandayo, uma amazinga okushisa aphansi ahlanganiswa nomoya onamandla, ukubanda kwamakhaza kwasondela kakhulu ngakhoke kwavela izimo zengozi enkulu .
Le fomula yathuthukiswa eminyakeni edlule yaze yafinyelela umkhawulo wayo ngo-2001 ngokuvumelana phakathi kososayensi baseCanada nabase-United States. Ifomula ecacile yokubala umuzwa oshisayo yile:
I-Tst = 13.112 + 0.6215 Ta -11.37 V0.16 + 0.3965 Ta V0.16
Uma sengeza amanani kwifomula yethu sizokwazi ukubikezela izinga lokushisa esizozizwa lapho siphuma, ngale ndlela sizokwazi ukuthi sigqoka kanjani kangcono ukuze sihlale sibanda kakhulu futhi sigweme imikhuhlane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Uyini umoya opholile futhi ubalwa kanjani?
Leyo yindlela yokukhohlisa, ngoba umuzwa oshisayo ungahluka kumuntu ngamunye, kuthatha ikhompiyutha enkulu ukukala umuzwa wabantu
udokotela h sprenger kusho
ngaphandle, umuzwa oshisayo awuhlotshaniswa nengcindezi, ngakho-ke awukwazanga ukuhlanganiswa nemizwa yokunethezeka, inhlalakahle, ingcindezi, njll., imizwa echazwe kakhulu yezinzwa zethu ezi-5 ...
Phendula ku-hector h sprenger